Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 64-unug oo al-shabaab ay ku bur burisay Muqdisho bilihii tegay – Radio Daljir
Nofeembar 7, 2013 3:18 b 0
Muqdisho, November 7, 2013 – Wasaarada arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay bur burisay 64 unug oo ay Al-shabaab ku lahaayeen gudaha magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdikariin xuseen guuleed, waxaa uu xaqiijiyey in muddo saddex bilood ah ay ku bur buriyeen unugyada Al-shabaab, isagoo xusay in qaar ka mid ah unugyada ay dumiyeen qaarkood ay si toos ah u shaqaynayeen.
?ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya ayaa fuliyey howl-gallada bur burinta ee Muqdisho ka dhacay laguna beegsaday unugyo ay al-shabaab leeyihiin.? Ayuu yiri Guuleed
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya mudane Guuleed ayaa intaas ku daray ?Unugyada qayb ayaa toos u shaqaynayey, kuwa kalena waxay ahaayeen amar sugayaan.
Dowladad Soomaaliya waxay sheegtay 64-ta? unug ee la bur buriyey in ay qorshaynayeen in ay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ka fuliyaan weeraro khal-khal gelin ah iyo kuwa Argagixiso oo awood badan.
Ururka Al-shabaab, weli kama aysan hadlin hadalka ka soo yeeray wasaarada arrimaha gudaha ee Jamhuuriyada Soomaaliya, weeraradii Muqdisho ay ka fulin jirtay Al-shabaab ayaa yaraaday dhowrkii bilood ee u dambeeyey.
Ra?isal wasaare Saacid oo balan-qaaday soo celinta adeegyadii bulshada ee Jubbooyinka (Dhegeyso)